रेमिट्यान्स्ले धानेकाे देश, कति भित्रियाे एक वर्षमा रेमिट्यान्स् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more रेमिट्यान्स्ले धानेकाे देश, कति भित्रियाे एक वर्षमा रेमिट्यान्स् ?
साउन ३ गते, २०७६ - २१:३२
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को एघार महिनाको अवधिमा आठ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थित’मा सात खर्ब ९९ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको उल्लेख छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
अमेरिकी डलरमा भने विप्रेषण आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ‘ट्रान्सफर’ १६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब पाँच अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्राप्ति ०.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण)का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या सो अवधिमा ३७.३ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ८.२ प्रतिशतले घटेको थियो ।
साउन ३ गते, २०७६ - २१:३२ मा प्रकाशित